“Mourinho waxa uu qaaday Champions League isagoo aanan kubbad ciyaarin” – Xiddig u soo ciyaaray Inter Milan – Gool FM
“Mourinho waxa uu qaaday Champions League isagoo aanan kubbad ciyaarin” – Xiddig u soo ciyaaray Inter Milan
Haaruun March 29, 2021
(Milano) 29 Maarso 2021. Kooxda kubadda cagta ee Inter Milan ayaa fasalkii 2009-10 ku guuleysatay tartanka Champions League, horyaalka Serie A iyo tartanka Coppa Italia xilligaas oo uu hoggaaminayay Tababare Jose Mourinho.
Sidaas darteed, Inter ayaa ah kooxdii ugu dambeysay ee ka dhisan dalka Taliyaaniga ee ku guuleysatay tartanka horyaallada Yurub, iyadoo sidoo kalena ah kooxda kaliya ee Taliyaani ah taasoo saddexley koobab ah qaadda hal xilli ciyaareed.
Balse guulahaas ma aysan cajabinin weeraryahankii hore ee Nerazzuri, Antonio Cassano, waxaana uu dhaliilsan yahay qaab ciyaareedka kooxda ka dhisan Stadio Giuseppe Meazza markii ay gacanta ku dhigayeen Champions League.
“Waa inaan dhahaa Inter waa kooxdeyda waxayna ku guuleysatay Champions League 11 sano ka hor, balse ma aysan ciyaareyn kubbad” ayuu Cassano ku yiri Christian Vieri oo ay isku koox ahaayeen.
38-jirka Taliyaaniga ah ayaa Inter usoo ciyaaray 2012 illaa 2013 isagoo xilligaas kaga soo biiray AC Milan oo ay magaalada Milano ku xafiiltamaan.
Saddex ka mid ah Kooxaha ka dheela horyaalka Premier League oo ku tartamaya saxiixa xiddig ka tirsan RB Leipzig
Juventus oo SHAN xiddig suuqa dhigeysa xagaagan... (Dybala oo ku jira & CR7 oo...)